Iwe unogona ikozvino kuchengetedza Santa Claus kurarama kubva kuGoogle Mepu paIOS | IPhone nhau
Iwe unogona ikozvino kutevera Santa Claus kurarama kubva kuGoogle Mepu paIOS
Sezvo iwe ungangodaro wakanzwa vashandisi veApple, zvinokwanisika kutevera munguva chaiyo isingasviki pane Santa Claus kuburikidza nekufambisa uye mepu yekushandisa par kugona, Google Mepu. Zvisinei, yaive sarudzo yakanonoka kunyanya kuIOS, uye zvakanyanya zvekuti yakauya panyanga, nekuti sekuziva kwako, nhasi ndiDecember 24, Eve yeKisimusi, iro chete zuva pagore iro Santa Claus anoshanda . Ngatitarisei nezvekutevera kweGPS kweSanta Claus iyo vakomana paGoogle vaona zvakakodzera kupinza muGoogle Mepu mangwanani ano.
Isu tinofanirwa kuyeuka kuti kuteedzera hakuitwe kuburikidza neGoogle Mepu application application, asi isu tinofanirwa kuenda kuGoogle injini yekutsvaga kubva kuSafari. Kana tangove paGoogle, tinonyora "Google Santa Tracker" mune yekutsvaga injini uye pinda. Iye zvino tichazopihwa pekutanga kutsvaga ine logo yakatsvuka, ipapo tinayo, kana tikasarudza iyi sarudzo yakavandudzwa zvizere yeGoogle Mepu ichavhurwa kuti tikwanise kutevera Santa Claus nenzira yakaoma kwazvo, pane izvi iyo chaiyo nguva yekunyora Iri muAustralia, 14.500 km kubva kuSpain
Iyi inzira yekuziva yekuziva kuti "rinosvika rinhi" pamba pedu, kunyangwe tichizvipira kuzvivaraidza vana nazvo uye nekudaro tinogona kuvadzikamisa zvishoma apo zvipo zvavo zvinouya. Kunyange zvakadaro, MuSpain, tsika yakadzika midzi yakamirira zvipo kuMadzimambo matatu, husiku hwaJanuary 5 kusvika 6 wegore rega., apo zvipo zvinoiswa. Chero ipi tsika yako, tarisa iyi modhi yekutarisa yaSanta Claus, kuti seGoogle zvayaisa mabhatiri uye sarudza kukwirisa chimbo chekutarisa cheMelchor, Gaspar neBaltasar.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iwe unogona ikozvino kutevera Santa Claus kurarama kubva kuGoogle Mepu paIOS
Iyo yakarasika pfuma, yemahara kwenguva shoma